Forum serasera malagasy vita iny ny CAN, fa hiroso @ CHAN - Dinika forum.serasera.org
vita iny ny CAN, fa hiroso @ CHAN
Fitohizan'ny hafatra : vita iny ny CAN, fa hiroso @ CHAN
vazivazo - 18/07/2019 16:16
Toa mandeha be ny feo fa ekipa hafa mihitsy no hiatrika ilay match @ CHAN, sao dia efa zatra naheno ny anarana sy nahita ny filalaon'ireto Barea efa malaza ireto isika ka sao handiso fanantenana ny maro izany ekipa vaovao izany eee? mba SANINAaaaaa!!!!!
DotMG - 19/07/2019 14:32
Ohatry ny hoe tsy dia arakao tsara ilay CHAN dia aleo hazavaina kely ary e!
Amin'ny CHAN dia tsy azo ampilalaovina izay mpilalao avy amin'ny firenena iray kanefa tsy ao anatin'io firenena io ny kilioba ilalaovany. Lalàna mifehy ny CHAN io fa tsy hoe isika no namorona azy. Amin'ireo mpilalao 23 afaka nampilaharin'i Dupuis tany Egypta dia 2 ihany no milalao eto an-toerana ka azo nantsoina hiatrika ny CHAN, dia i Romario Rakotoarisoa (Fosa) sy Jean Dieu Donné Randrianasolo (Cnaps).
Faharoa, mbola ao anaty éliminatoires aloha isika izao (sahala amin'ireo matches de groupe nifanandrinana tamin'i Senegal, Guinée Equatoriale sy Soudan).
Hifanandrina amin'i Mozambique aloha isika, lalao mandroso sy miverina ka raha resy eo dia tapitra ny làlana. Raha maharesy isika dia hifandona amin'izay mandresy amin'i Comores sy i Namibie. I Comores no tena atahorana kokoa ary manana herijika handresena antsika. Raha resy eo koa dia tapitra ny làlana. Ilay ifanandrinana amin'i Mozambika izany efa miendrika demi-finale ary ny lalao aorian'izay miendrika finale aty amin'ny éliminatoires.
Raha mandresy amin'ireo lalao rehetra ireo isika dia izay vao tafiditra amin'ilay tena CHAN, ka ekipa 16 no ao anaty vondrona 4.
hery - 19/07/2019 17:00
Mbola ho lavitra izy izany :-o